आफ्नै दुध बेचेर लाखौ कमाई गर्दै महिला – NepalayaNews.com
५ चैत्र २०७४, सोमबार १५:३४
राफाएलाको दुध किन्नेवाला बडि बिल्डरले यो दुध मांसपशिका लागि व्यापाक फाइदा हुने मान्दै आएका छन् । पुरुषहरुले आफ्नो दुध किनेर के गर्छन् भन्ने विषयमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको राफाएलले बताएकी छन् । तर उनीहरुले उक्त दुध पिउने गरेको बताएको उनले बताएकि छन् । नेपाली रुपैयाँ अनुसार उनले एक औंश दुधको १२८ रुपैयाँ ४९ पैसा लिने गरेकि छन् । राफाएला लाप्रोउले हालसम्म लगभग ५ सय लीटर दुध बिक्री गरिसकेकि छन् । यसबाट उनले ४ हजार ५ सय पाउन्ड अर्थात ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ कमाइसकेकि छन् । लाप्रोउ आफ्नो श्रीमान ऐक्स र दुई बच्चाका साथ बस्दै आएकि छन् ।एजेन्सी
किन अर्काको श्रीमानसंग सल्किन्छन् महिलाहरु ?विज्ञानको अर्थ यस्तो छ	५ बैशाख २०७६, बिहीबार १५:५२
दाह्री पाल्नेहरुमा भुस्या कुकुरमा भन्दा पनि धेरै किटाणु !	४ बैशाख २०७६, बुधबार १५:१९
औंलाको यस्तो चक्रले बताउँछ तपाई कति भाग्यमानी भनेर	२ बैशाख २०७६, सोमबार ०७:१८
कलियुगको आयू अब कति ? कहिले शुरु भएको थियो कलियुग ?	२ बैशाख २०७६, सोमबार ०६:३१
पुरुषलाई यी पाँच कुराले अत्यन्तै लाजमर्दो बनाउँछन्	२ बैशाख २०७६, सोमबार ०६:२६
यी राशि भएका पुरुषले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राख्छन् । जानिराख्नुहोस्	३० चैत्र २०७५, शनिबार १२:२४
डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्काले विश्व बैंकको अध्यक्ष बन्न मानिन ५ चैत्र २०७४, सोमबार १५:३४
न्युयोर्कमा मिथिला सांस्कृतिक सांझ सम्मपन्न ५ चैत्र २०७४, सोमबार १५:३४
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका वेल्डले उम्मेदवारी घोषणा गरे ५ चैत्र २०७४, सोमबार १५:३४